Gịnị bụ akwa akwa | Rayson
M wee jiri ha mee ihe. M na-akpọgharị bọọdụ skit na ya iji mee ka ala dị ka o kwere mee. Nke a ga - egbochi nha na - ezighi ezi n'oge nhazi. I nwere ike iji ihe ngosi iji nyere gị aka itinye ihe niile. X-Axis na Z-Axis bụ ihe ịchọrọ iji wepụta oge gị na, n'ihi na nke a dị ezigbo mkpa maka ma igwe gị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị. .
\_ "Anyị bụ ndị ọzọ na nzukọ nke ọma. Onye ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ndị na-eme ka ndị otu frint na-eweta uru pụrụ iche na ugbu a anyị amalitela iso ọtụtụ ndị ahịa anyị na-asọrịta mpi ụwa. \_" Mr . Ọ bụghị nke a na-ahụ maka frint na August, mgbe o mechara ma zụlite ụlọ ọrụ kemịkalụ nke ụwa na enweghị njikọ na enweghị nkwekọrịta na ici plc.
McGingey mmanya na-egbu egbu ma julie weghachite ya n'ụlọ ha na Ballanamallard na mpụga obodo. Mgbe ahụ Julie gwọrọ ụmụaka ahụ n'ụlọ. Nanny anọwo na-elekọta ụmụ atụrụ ha abụọ, Shannon, onye dị afọ ise na atọ. Karieleley dị afọ. N'oge na-erule ụbọchị ga-abịa, nwa ya na nna ya eguzosi ike n'ihe, Betty na Gerald, na Mano Hamilton.